I-MoDaMo iyamthabatha kwaye ihlasele ihlobo lohlobo lwemibala kunye nemvakalelo yentwasahlobo. Izilingo zasehlotyeni kunye nentwasahlobo zikhupha wonke umntu oya kwii-salon ze-MoDaMo: kukho iikholeji zasehlobo / ihlobo ezivela apha e-Eugen Klein, eTuzzi, Marcona, Isabell, Creenstone, Avantgarde, Madarin & Mint, Zaffiri, Aurelie, Hauber, LuisaCerano, Daniel Hechter, uFrank Walder , UBarbara Schwarzer. Kuzo ingca eluhlaza obuncwane kunye nomculo othobekileyo weentaka, ubuhle beengubo ezikhethiweyo kunye nokukhanya kwezinto eziqhelekileyo eziqhelekileyo, ukucaca kwejometri kunye nokunyaniseka. I-Avanturnoe i-spring mood inikezwa kwaye izinto ezintsha zentwasahlobo ezayo ye-fashionistas!
I-Nokia: Isihloko esikhethekileyo
Ingcamango yabasetyhini yadalwa kwinkampani yakwaNokia llluvial Pink Collection - iinguqulelo zangaphambili zemizekelo ye-Nokia 5530 XpressMusic, i-Nokia 6700 yeklasi kunye ne-Nokia 6303 yakudala. Kuzo zonke izinto zibafazi ngokwenene. Kwaye kunye nokudibanisa kwipinki epholileyo kunye nomhlophe obumnyama okanye obumhlophe beqhwa. Yaye imodeli ecocekileyo, iipaneli zokuhlobisa, i-cover kunye ne-strap. Isitayela semodeli ixhaswa ngamaphepha amaphephadonga afanelekileyo, iingqungquthela kunye nokuncenceza, kunye neenkonzo kunye nomxholo we-Ovi unikezela ngokulula kunye nokusebenza kwabanini babo.
ULouis Vuitton: i-cityscape
Sisekhosini sibonga kwiimveli zentwasahlobo ezayo ye-fashionistas. ULouis Vuitton, ophefumlelwe ngqokelela lwevili, kwaye thina, ephefumlelwe ziintleveli zakhe, siya kwixesha le-fashion-2010. Kwiphepha, ezandleni zakhe, kunye nje kunye naye - iingxowa ezivela kwiqoqo elitsha likaLouis Vuitton Monogram Idylle. Iimonograms zaseLouis Vuitton eziqhelekileyo zifumaneka kwinqanawa le-Idylle elincinci, elikhanyayo, elenziwe ngekotoni kunye ne-fibre synthetic. Kwiichungechunge zeMonogram Idylle - iikhwama zorhwebo ezintle, imithwalo kunye nezinto eziphathekayo kunye namanqaku asezidolophini.
ULowewe: ukungaziphathi kakuhle
I-brand yeLoewe ibonisa iimfihlelo ezifihlakeleyo zowesifazane weshumi lama-20. Akayonto encinci, uyisityambo esimnandi, umvukeli wendalo kunye ne-seductress ngokubizwa. I-aura yakhe yiphunga le-Aire Loco esuka eLowewe: kuyo ubumnandi bomnandi, izithelo zentshiseko kunye ne-jasmine ivela kubuqhophololo obukhulu be patchouli, imisedare kunye ne-vanilla. Iphofu igxininisa iimvakalelo ezibangelwa ngumnikazi wazo. I-Aire Loco - indlela yokuqala yohlobo lokuba nesibindi sokuba nguwe. Umxube omtsha weentyatyambo ugcinwa kwisibambiso sombala we-lemon-ophuzi, ephihliweyo, kodwa ngaphandle kweemeko, njengokungathi umoya ovuthayo wawuchukumise, kwaye utyhafile ngesenzo sobuwula.
Izinto ezilungileyo ziphawulwe ngokubomvu. Iimbalo ezichanekileyo zilungiselelwe ngoncedo lwezinto eziqhaqhazelisayo, izixhobo zoshishino ezinobuncwane kunye nezixhobo eziphambili.
Umfanekiso wesityezelo wendoda enesithambathiso sinomdla ukuhlanganisana kunye nemibulelo yemithombo yasemthonjeni yokuza kubasetyhini befashoni: izaphulelo ezinkulu kwi style 70, i-chronometer kwi-leather strap, inetha elihle kakhulu elincinci ... I-Samsung N220 iyisigxina esithembekileyo seodayari, kwaye izintlu zeenkokeli zixhasa ngokubomvu. Ukongeza kwindlela ebonakalayo ebonakalayo, intsingiselo inamakhono amaninzi angaphakathi: amandla anyuliweyo, ekhanyayo / kunye nekrini ecacileyo kunye nobomi bebhetri ukuya kwiiyure eziyi-12. Ngoku unokubeka iifoto zakho kwi-Intanethi.
Bonke abesifazana befestile badla ukuba bathandeke kwaye bantle, bengenakuphikiswa. Kodwa akusiyo wonke umntu olawula ukugqoka kuphela. Emva kwakho konke, ukuze ugqoke ngabanye kwaye uqobo, kufuneka uhlambe impahla kunye nezinye izesekeli kwisicelo, ngaphandle koko awukwazi ukuba ngumntu. Ukwenza imfashini kukuba ngumntu ngokwenene. Okokuthi, akuyimfuneko ukugcina imfashini kwaye ube yi-fashionista, into eyona nto kukuba nombono wakho nobuntu, ngoko awuyi kuba nomdla kwabanye kuphela, kodwa uya kukhangeleka.
Yintoni enokuyenza ngokuhlwa: i-comedy series
Iifilimu ezilungileyo kakhulu ngothando
Ndiyimbali: ukuhlaziywa kwefilimu
Izitya ezifanelekileyo ezivela kumakhowe
Ikhalenda lezeMpilo: Epreli, ngoMeyi, ngoJuni, ngoJulayi
Yintoni enokuyenza xa umyeni wam enekosikazi
Ukubunjwa kwejaji yomboniso "Golos" 5 yonyaka yaziwa